BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Cimilada hawada ee Australia
Cimilada hawada ee Australia
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 Novermber, 2011, 16:15 GMT 19:15 SGA
Saadaasha hawada ee Australia
Hey'adda saadaasha hawada ee Australia iyo bulshada cilmiga bada ayaa soo ku soo bandhigeysa sawirradan calendar-kooda hawada 2012
Calendar-kan ayaa sanad walba la soo saarayay ilaa 1985, sawirro laga soo xushay tartan dalka oo dhan. Kor, duufaan ciid wadata meel ku dhaw Warralong, mujtamaca Aborigines, waqooyi bari ee Australia. Sawir qaade: Suzanne Pollard
Calendar bileed kasta waxa ku yaal sawirro waaweyn oo muujinaya daruurro, roob mahiigaan ah, hilaac, qaanso roobaad, duufaanno iyo muuqaalo kale, Sawirkan waa daadad ku dhuftay Cooper Creek, Queensland.
Sawir qaade: Helen Commens
Waa hordhac duufaan kor joogta Undertow Bay, oo u dhaw Inverloch oo ah gobolka Victoria ee Australia.
Sawir qaade: Stephanie Hall
Hilaac ka dilaacay Darwin korkeeda oo ah waqooyiga Australia.
Sawir Qaade: Mark Percival
Dabayol iyo duufaan baraf wadata oo heysa buuraleyda buluugga ah ee galbeedka Sydney. Sawir qaade: John Martyn
Calendarkan waa kii 28aad waxaana sanad walba laga iibiyaa ilaa 50,000 oo nuqul.
Sawir Qaade: Paul Burgess
Sawirkan daruurraha waxaa qaaday sawir qaade Sudan Mace oo aad u xiiseyneysay
Daruurro qurux badan oo duljooga Queensland. Waxaa qaaday sawirkan Gina Harrington
Noocyo kale oo ka mid ah duruurraha. Sawir qaade: Barend Becker
Geed ku yaalla meel u dhaw xeebta waqooyi ee Sydney waa April 2010. Waxaa qaaday sawirka Kathryn Lynch
Markii harada koonfurta Australia ay bilowday inay buuxsanto July 2010, sawir qaadayaal dunida oo dhan ka socda ayaa booqday harada oo ah mid biyo dhanaan leh tan ugu weyn adduunka